जेठ ३१ का लागि तय भएको दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव अघि जेठ १२ गते संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्को मधेशी घटक राजपा नेपाललाई चुनावमा तालमेल गर्न आग्रह गरे । राजपा नेता महन्थ ठाकुरको सानो ठिमी निवासमा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले संयुक्त रूपमा चुनावमा तालमेल गर्न आग्रह गरेका थिए । यादव र गच्छदारको आग्रह त्यतिखेर आएको थियो जतिखेर राजपा चुनावमा जाने निश्चित थिएन ।
उनीहरूले मधेशी माग बमोजिम संविधान संशोधन गर्न सरकारले आफ्नो तर्फबाट सबै शक्ति लगाए पनि मतदान हुने घडीमा दुई तिहाई बहुमत पुग्न नदिन चलखेल भएको बताउँदै अब चुनावमार्फत् राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै ठाकुरलाई ‘जिम्मेवार निर्णयका लागि’ आग्रह गरेका थिए ।
‘संसदको अहिलेकै स्थितिमा हामीले मागेको संविधान संशोधन कठिन रहेको यथार्थ बुझिसकेपछि अब के गर्ने भन्नेमा स्पष्टता चाहिन्छ,’ फोरम अध्यक्ष यादवको भनाइ थियो । यादवको आग्रहमा ठाकुरले संविधान संशोधन अझै पनि मधेश आन्दोलनको बटमलाइन रहेकाले अहिलेकै अवस्थामा त्यसलाई छाडेर चुनावमा जान कठिन हुने जवाफ दिएका थिए । आन्दोलन र चुनावमध्ये कुनै एकमा जानुपर्ने, दुवैमा खुट्टा राख्न खोज्दा दुर्घटना हुन सक्ने यादवको कटु भनाइ ठाकुरलाई पचेन र अन्तमा निर्वाचनमा नजाने निर्णय गरेर सम्भावित तालमेलको वातावरण विथोलिएको थियो ।
तर उही राजपा स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लियो र अहिले संघीय फोरमसँग आगामी प्रदेश र संघीय संसदको चुनावका लागि तालमेल गरिसकेका छन् ।
यसबाट के अर्थ लाग्छ भने राजपामा स्थिरताको कमी, दीर्घकालीन सोचको अभाव र समयमा निर्णय लिन सक्ने क्षमता छैन । तेस्रो चरणको चुनावमा संघीय फोरम एक्लै छ दल मिलेर बनेको राजपामाथि भारि परेको छ । निर्वाचनको जनादेशबाट संघीय फोरम मधेशमा ठूलो शक्तिको रूपमा उदाएपछि यसबाट पाठ सिकेर राजपा आसन्न प्रदेश र संघीय संसदको चुनावका लागि तालमेल गर्न तयार भएको हो ।
यदि स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा संघीय फोरम र राजपा मिलेर चुनाव लडेको भए अहिले दुवै दलले पाएको ५१ स्थानीय तह मध्ये लगभग सय स्थानमा अवश्य जीत हासिल गर्न सक्थ्यो । तर एक आपसमा सहकार्यको कमी र दम्भले दुवै दललाई काँग्रेसभन्दा कमजोर बनाइ दिएको छ । तर एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रभन्दा ती दुई मधेशी दलले पाएको मत परिणाम हेर्दा सन्तोष गर्न सकिन्छ ।
तर यहि कुरा उसले जेठ १२ गतेको बैठकमा उपेन्द्र यादवको आग्रह स्वीकार गरेको भए निश्चित रूपमा आज मधेशको अंकगणित फरक हुन्थ्यो ।
यद्यपी पछिल्लो तालमेलको कुरा वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको निर्माणको परिणति पनि हो जसले मधेशी दल खास गरी राजपा र संघीय फोरमलाई एक आपसमा तालमेल गर्न बाध्य पारेको छ ।
बृहत् वामपन्थी समीकरणमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति मिसिएपछि मधेश केन्द्रित दलले पनि एकता प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेश–२ मा दोस्रो भएको संघीय फोरम र तेस्रो भएको राजपाबीच आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा तालमेल तथा दीर्घकालीन एकताका लागि पहल भएको हो, यसलाई सुखद सुरूवात मान्न सकिन्छ ।
एमाले–माओवादी गठबन्धनले मधेश केन्द्रित दललाई आफ्नो समीकरणमा समेट्न राजपा फोड्ने प्रयास गरिरहेका बेला दुई मधेश केन्द्रित दल एकता प्रयासमा लागेका हुन् । ‘राजपा फोड्ने प्रयास कसैले नगरे हुन्छ, हामी एक छौं । हामी अझ बृहत्तर गठबन्धनको प्रयासमा छौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअघि सबै मधेश केन्द्रित दल एक ठाउँमा उभिनेछौं,’ राजपा अध्यक्ष मण्डलका एक नेता राजेन्द्र महतोले भने ।
राजपा अध्यक्ष मण्डलकै अर्का नेता शरत्सिंह भण्डारीका अनुसार फोरमसँग निर्वाचनअघिको तालमेल र दीर्घकालीन रूपमा पार्टी एकताबारे छलफल चलिरहेको छ । ‘साँच्चैभन्दा वामपन्थी एकताले हामीलाई झस्काएको पनि छ र केही सम्झाएको पनि छ । अब मधेशका मुद्दामा लडिरहेका दलहरू किन नमिल्ने? मुद्दा समान छन्, फरक–फरक रूपमा किन जाने ? हामी छिट्टै मिल्नेछौं, कम्तिमा चुनाव अघिसम्ममा सहकार्यको समझदारी गर्नेछौं,’ उनले भने ।
संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका अनुसार स्थानीय तहकै चुनावताका सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा अन्य मधेशवादी दलसँग कुरा भएको थियो । ‘राजपा लगायतका केही दलले चुनावमा सहभागी नहुने निर्णय गरे । त्यसकारण सहकार्य हुन सकेन । हामी संख्याभन्दा पनि मुद्दा केन्द्रित छौं । फेरि पनि मधेशवादी दलहरू मिलेर जानुको विकल्प छैन,’ यादवले भने, ‘छिट्टै ठोस नतिजा आउनेछ ।’
जति प्रयास र दबाव आए पनि एमाले–माओवादी समीकरणमा नजोडिने मधेश केन्द्रित दलको अडान छ । ‘कांग्रेसबाट पनि सहकार्यको प्रस्ताव आएको छ, तर हामी मधेशवादी दल मिल्यौं भने काफी हुन्छ । उनीहरूभन्दा हामी नै हाबी हुनेछौं,’ राजपा अध्यक्ष मण्डलका एक नेता महेन्द्र राय यादवले भने ।
राजपा र संघीय फोरमबीच चुनावमा तालमेल गर्ने सहमति भएपछि मधेशमा उत्साह छाएको छ । मधेशी जनता तालमेल मात्र होइन, सबै मधेशी दलबीच एकीकरण भएको हेर्न चाहेका छन् । यो एकीकरण सम्भवतः संघीय प्रदेश अघि भयो भने मधेशका २० जिल्लामा मधेशी दल एक नम्बरमा आउने पक्का छ । यद्यपी अहिले तालमेल गर्ने मात्र सहमति भएकाले दुबै दल आपसी समझदारीका आधारमा संयुक्त भइ साझा उम्मेदवार उठाउनु पर्छ । यसरी सहमति भएसँगै मधेशवादी दलहरू पनि बलियो दावेदारीका रूपमा उभिने देखिन्छ ।
-मधेश दर्पण फिचर सेवाबाट ।